I-china Igama elihle elikhutshiwe ingxubevange 6061 6082 5083 2024 7075 abavelisi be bar yealuminium kunye nabathengisi | Huifeng
Igama elihle elikhutshiweyo ingxubevange 6061 6082 5083 2024 7075 bar yealuminium ejikelezayo
Ingcaciso bar yealuminium
Ingxubevange: 2A12, 2014, 2014A, 2017A, 2024, 3003, 5083, 6005A, 6060, 6061, 6063, 6063A, 6082, 6463, 7020, 7075 njl
Ubushushu: O H112 T3 T351 T4 T42 T5 T6 T651
Sangqa Out: 10-260mm
I-Sharpe: Ujikeleze, isikwere, uxande, i-Hexagonal
Ngokwezinto ezahlukeneyo zesinyithi eziqulethwe ziintonga zealuminium, iintonga zealuminium zingahlulwahlulwa ngokweendidi ezi-8, oko kukuthi, zinokwahlulwa zibe ngamacandelo e-9:
1. Iirandi zealuminium ezingama-1000 zimele i-1050, 1060, kunye ne-1100 series. Kuluhlu lonke, uthotho lwe-1000 lolwothotho kunye nomxholo wealuminium. Ubunyulu bunokufikelela ngaphezulu kwe-99.00%. Kuba ayiqulathanga ezinye izinto zobuchwephesha, inkqubo yokuvelisa ilula kwaye ixabiso lincinci. Okwangoku lolona chungechunge luqhelekileyo lusetyenziswayo kumashishini aqhelekileyo. Uninzi lweemveliso ezijikeleza kwimarike zii-1050 kunye ne-1060 uthotho. Iirandi ezingama-1000 zeruminiyamu yeentonga zichonga ubuncinci bomxholo wealuminium kolu luhlu ngokwamanani amabini okugqibela eArabhu. Umzekelo, amanani amabini okugqibela ama-Arabhu kuthotho lwe-1050 angama-50. Ngokomgaqo wegama lophawu lomhlaba jikelele, umxholo wealuminium kufuneka ufike kuma-99.5% okanye nangaphezulu ukuze ube yimveliso efanelekileyo. Umgangatho wobugcisa welizwe lam i-aluminium (gB / T3880-2006) ikwacacisa gca ukuba umxholo wealuminium ka-1050 ufikelela kuma-99.5%. Kwangokunjalo, umxholo wealuminium ye-1060 yeentonga zealuminium kufuneka ifike kuma-99.6% okanye nangaphezulu.
2. 2000 uthotho aluminiyam iintonga amele 2A16 (LY16) kunye 2A02 (LY6). Iingcingo zealuminium ezingama-2000 zibonakaliswa kukuqina okuphezulu, kunye nomxholo ophezulu wobhedu, omalunga ne-3-5%. Iingcingo zealuminium ezingama-2000 zezinto zealuminium, ezingasetyenziswa rhoqo kwimizi mveliso eqhelekileyo.
I-2024 yinto eqhelekileyo ye-aluminium alloy kuluhlu lwealuminiyam-ithusi-yemagniziyam. It is a ingxubevange ukunyanga ubushushu ngamandla aphezulu, processing lula, ukujika lula, kunye nokumelana jikelele.
Emva konyango lobushushu (T3, T4, T351), iipropathi zoomatshini zeentonga zealuminiyam ezingama-2024 ziphuculwe kakhulu. Iiparameter zayo zelizwe ze-T3 zezi zilandelayo: amandla eqine i-470MPa, i-0.2% yamandla okuvelisa i-325MPa, i-elongation: i-10%, ukukhathala amandla i-105MPa, ubunzima be-120HB.
Ukusetyenziswa okuphambili kweentonga zealuminium ezingama-2024: ubume beenqwelomoya, iirivets, iihabhu zelori, izinto ezijikelezayo kunye nezinye iindawo ezahlukeneyo zolwakhiwo
3. 3000 uthotho aluminiyam iintonga ikakhulu amele 3003 kunye 3A21. Itekhnoloji yemveliso yeentonga ze-aluminium ezingama-3000 kwilizwe lam zibalasele. Iindidi ezingama-3000 zeeruminiyamu zenziwe ngeemanganizi njengeyona nto iphambili. Umxholo uphakathi kwe-1.0-1.5, oluthotho olunomsebenzi ongcono wokulwa nerusi.
4. Iindonga zealuminium ezingama-4000 Ummeli ngama-4A01 4000 eentonga zealuminium zothotho ezinomxholo ophezulu wesilic. Ngokwesiqhelo umxholo wesilicon uphakathi kwe4.5-6.0%. Ezo zinto zokwakha, izahlulo zoomatshini, izinto zokwakha, izinto ze-welding; Indawo yokunyibilika ephantsi, ukumelana nokulunga komzimba, inkcazo yemveliso: ukumelana nobushushu kunye nokunganyangeki
5. Iindonga ze-aluminium ezingama-5000 zimele i-5052, 5005, 5083, kunye ne-5A05. Iindonga ezingama-5000 zeruminiyamu zezentonga zezinto ezisetyenziswa ngokuxhaphakileyo kusetyenziswa ingxubevange yeentonga zealuminium, eyona nto iphambili kwimagniziyam, kwaye umxholo wemagniziyam uphakathi ko-3-5%. Inokubizwa ngokuba yi-aluminium-magnesium alloy. Ezona mpawu ziphambili luxinano olusezantsi, amandla aphezulu eqine kunye nobude obuphezulu. Kwindawo enye, ubunzima be-aluminium-magnesium alloy bungaphantsi kunolunye uthotho, kwaye ikwasetyenziswa ngokubanzi kumashishini aqhelekileyo. Kwilizwe lam, intambo ye-aluminium ye-5000 yoluhlu yenye yeendidi ze-aluminium ezikhule ngakumbi.
6. Iintonga zealuminium ezingama-6000 zimele i-6061 kunye ne-6063 ikakhulu ene-magnesium kunye ne-silicon. Ke ngoko, izibonelelo zothotho lwe-4000 kunye ne-5000 series zigxile. I-6061 yimveliso yokwenziwa kwealuminium ebandayo, efanelekileyo kwizicelo ezineemfuno eziphezulu zokumelana nokubola kunye negcwala. . Ukusebenza kakuhle, ukutyabeka ngokulula, kunye nokusebenza kakuhle.
7. I-7000 yeentonga zealuminium imele 7075 kwaye ubukhulu becala ine-zinc. Ikwangokothotho lokuhamba ngenqwelomoya. I-aluminium-magnesium-zinc-copper alloy, i-alloy ephathekayo yokushisa, kunye ne-aluminium ephezulu kakhulu ene-wearable resistance. Kuxhomekeke ekungenisweni elizweni, kwaye itekhnoloji yemveliso yelizwe lam kufuneka iphuculwe.
8. 8000 series aluminiyamu iintonga ezisetyenziswa ngokuxhaphakileyo ezingama-8011 zezolunye uthotho, kwaye uninzi lwezinto ezisetyenzisiweyo zenziwe ngefoyile yealuminium, engasetyenziswa kakhulu kwimveliso yeentonga zealuminium.
"I-Jinan Huifeng aluminium Co., LTD" ihlengahlengisiwe kwishishini eliqhutywa ngurhulumente, elibekwe kwidolophu yaseTshayina “rose” —iPingYing County yedolophu yaseJinan, igubungela indawo engaphezulu kwamahektare angama-600, inefektri yemveliso emi-3 kunye nomzi-mveliso odibeneyo.
sinokuvelisa ityhubhu ye-aluminium engenamthungo, ibha yealuminium, umbhobho wealuminium, kunye neeprofayili zealuminium zeshishini, uthotho lwealloy ukusuka kwi-1xxx ukuya kwi-7xxx, ubushushu O H112 H24 T3 T4 T5 T6 T8 T651 Njl
Izixhobo ze-Aluminium extrusion kubandakanya iitoni ezingama-3600 kunye neetoni ezingama-2800 zokukhupha umatshini, iitoni ezingama-1350 iitoni ezili-1300 kunye neetoni ezingama-880 ezisebenza ngokuphindwe kabini kumatshini wokukhuphela, iitoni ezingama-800 eziwutshintshayo umatshini wokukhuphela, iitoni ezingama-630 ezingama-500 iitoni ezitshintshayo, umatshini wokulungisa uxinzelelo, ii-roller eziyi-11 ezithe nkqo, ityhubhu yokuzoba ityhubhu, umatshini wokuzoba intonga, i-400 KW eshushu nkqo yokucima iziko, izixhobo ezincedisayo kubandakanya iziko le-nitriding, iziko elifanayo, kunye ne-oveni yokuguga, iseti esibhozo sesithando sokungena rhoqo kunye namachibi e-oxidation.
Sidlulile kwinkqubo yokuqinisekiswa kwe-ISO9001, 2000, kunye nokuseta ilabhoratri yovavanyo lobuchwephesha, exhotyiswe nge-analyzer ye-spectrum, i-CNC tester tester, i-microscopy ephezulu yokukhulisa, i-hardness tester, njl, kunye nabasebenzi bethu abaqeqeshiweyo kunye, ukuqinisekisa umgangatho wemveliso ukuhlangabezana ngokupheleleyo neemfuno zabaxumi.
Ukudibana neemfuno zomthengi zihlala zizinto zethu. Uluhlu lweemveliso ezihlanganisiweyo lusinika izibonelelo ezingaphezulu. I-Jinan Huifeng aluminium Co, Ltd iya kuhlala inyanzelisa "ukubonelela ngeemveliso ezilungileyo ezonelisayo kubathengi, ukuphendula ngokukhawuleza kunye nenkonzo egcweleyo yokufumana abathengi"
Egqithileyo China mveliso 5052 PVDF umbala wawutyabeka aluminiyam coil ubukhulu 0.7mm
Okulandelayo: 6061 6063 7075 Aluminium Pipe / Aluminium Tube
Aluminium ingxubevange Intonga
IAluminiyam Round Intonga
IAluminiyam Yesikwere Intonga
I-Aluminium Tubular Bar
Intonga yeAluminiyam engaziwayo
Iibhari zeAluminiyam ezongeziweyo
Ulenze Aluminium Intonga
s I-Aluminium extrusion Bar
Intonga eQinisekileyo yeAluminiyam
Intonga yeAluminiyam eNgcwele
Iindidi zeeAluminiyam neeBhari
Igama elihle ingxubevange extruded 6061 6082 5083 2 ...